တခါတုနျးက သူငယျခငျြးနှဈယောကျ ခရီးတခုကို အတူ ထှကျခဲ့ကွသညျ။ တယောကျက ခြျောလဲ ရောထိုငျ အခှငျ့အရေးသမား၊ တယောကျက ယုံကွညျခကျြကို ခိုငျမာစှာ ဆုပျကိုငျထားသူ။
သူတို့သညျ တောနကျကွီး တခုကို ဖွတျသနျးသှားစဉျ မြောကျတအုပျ၏ ဝိုငျးခွငျးကို ခံလိုကျရသညျ။ လူမြား လူနိုငျ၊ မြောကျမြား မြောကျနိုငျဖွဈသောကွောငျ့ မြောကျမြား၏ ဖမျးဆီးခွငျးကို ခံရသညျ။
မြောကျတှကေ သူတို့နှဈယောကျကို မြောကျခေါငျးဆောငျထံ ချေါသှားသညျ။ မြောကျခေါငျးဆောငျက လူတှအေတိုငျး ပလ်လငျပျေါတှငျ ထိုငျနသေညျ။ သို့သျော မညျသညျ့အပျေါတှငျ ထိုငျသညျဖွဈစေ မြောကျသညျ မြောကျသာ ဖွဈသညျ။
သဈပငျပျေါထိုငျလညျး မြောကျက မြောကျ၊ ပလ်လငျပျေါ ထိုငျလညျး မြောကျက မြောကျသာ ဖွဈသညျ။ သို့သျော ထိုမြောကျက သူ့ကိုယျသူ လူပုံဖမျးကာ စိတျကွီးဝငျ နသေညျ။ အဘယျကွောငျ့ ဆိုသျော သူ့ကိုယျသူ လူ ဟု ထငျနသေောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
"အရှငျမငျးကွီး လူသားနှဈယောကျကို ဖမျးလာပါတယျ" ဟု မြောကျတှကေ ဆိုသညျ။ မြောကျမငျးက ကွညျ့လိုကျပွီး တယောကျကို ရှသေို့တိုးခိုငျးလိုကျသညျ။ "ဟေ့ လူသား မငျးရှကေ့ ပလ်လငျပျေါ ထိုငျနတော ဘယျသူလဲ ဆိုတာ သိရဲ့လား" ဟု မေးလိုကျသညျ။
ထိုသူကလညျး ပလ်လငျပျေါက မြောကျကို ဦးကုနျးခကြာ လကျအုပျလေး ခြီပွီး ပွောသညျ။ "မှနျလှပါ၊ သငျသညျ ဤလောက တခုလုံးကို စိုးမိုးအုပျခြုပျတျောမူသော မငျးမွတျ ဖွဈပါသညျ"
မြောကျက မွှောကျပွောနမှေနျး သိသျောလညျး နညျးနညျးတော့ ပီတိ ဖွဈသှားသညျ။ မြောကျမငျးက ဆကျမေးသညျ "ဒါဆိုကှယျ ငါ့ပတျလညျမှာ ခစားနတောတှကေရော ဘယျသူတှလေဲ" မြောကျက လညျညှိုးဝိုကျကာ မေးလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ။
ထိုသူက "အရှငျမငျးကွီးအား ခစားနသေော ကြေးတျောမြိုး၊ ကြှနျတျောမြိုး၊ မှူးတျောမြိုး၊ မတျတျောမြိုး၊ သူရဲတျောမြိုး၊ သူကောငျးမြိုးတှဖွေဈကွောငျးပါ" မြောကျမငျးက သဘောကသြှားသညျ။ "ဟေ့ ဒီလူကို ဆုတျော လာဘျတျောပေးကာ မွှောကျစားစေ၊ နောကျတယောကျကို ရှတေ့ျောသှငျး"
နောကျတယောကျကို မြောကျမငျးရှေ့ ချေါလာကွသညျ။ ပထမလူကို မေးသညျ့အတိုငျးပငျ မေးသညျ။ "လူသား၊ သငျ့ရှကေ့ ပလ်လငျပျေါမှာထိုငျနသေူဟာ ဘယျသူလဲ သိလား" ဆုရထားသူက သူ့အဖျောကို တိုးတိုးလေး ဆိုသညျ။
"ဟကေ့ောငျ မွှောကျပွော၊ စကွဝတေးမငျးကွီးလောကျကို မွှောကျပွော"
"ငါ့တသကျ မလိမျဘူးပါ။ ထို့ကွောငျ့ မြောကျကို မြောကျဟုသာ ပွောနိုငျမညျ"
"ဒါဆို မငျးသမှောပေါ့ကှ၊ လိမျလိုကျစမျးပါကှာ ဘယျသူသိတာ မှတျလို့။ ဒီတောထဲမှာ လူဆိုလို့ မငျးနဲ့ငါပဲ ရှိတာ"
"အေးကှယျ၊ မငျးသိမှာဖွဈလို့ ငါမလိမျခငျြတာပါ။ မငျးလိုကောငျက ငါလိမျပွောတာကို သိသှားမှာ ငါရှကျပါတယျ။ ဘယျသူမှ မသိတောငျ ငါ့ကိုယျ့စောငျ့နတျက သိမှာဖွဈလို့ ငါမလိမျနိုငျ"
ဒုတိယလူက ပလ်လငျပျေါက မြောကျကို လကျညှိုးထိုးကာ "သငျဟာ မြောကျပါ" ဟု ရဲဝံ့စှာ ဆို၏။ မြောကျက ဒေါသထှကျကာ
"သငျ ယခု စကားပွောနတော ဘယျသူလဲ ဆိုတာ သိရဲ့လား"
"ကြှနျုပျ ယခု စကားပွောနတော မြောကျပါ"
"တောကျ၊ စျောကားလှခညျြ့၊ နောကျဆုံးမေးမယျ ငါ့ကို ခစားနတောတှကေရော ဘယျသူတှလေဲ"
"သငျ့အပါးမှာ ဝနျးရံ ခစားနတောတှကေလညျး မြောကျတှပေဲ"
ပလ်လငျပျေါတှငျ ထိုငျနသေညျ့ မြောကျမငျးက စိတျဆိုးသညျ။ ပထမလူက သူ့ကို ဘုရငျ ဟု ထငျသညျ။ ဒုတိယ လူက သူ့ကို မြောကျဟု ချေါသညျ။ မြောကျသညျ မြောကျဖွဈသျောလညျး မြောကျဖွဈကွောငျး လကျခံ နိုငျစှမျး မရှိ။
သူ့ကို ခစားနသေူတှေ ကိုလညျး မြောကျတှဟေု ပွောနခွေငျးမှာ သူ့ကို လူတှေ မခစား၊ မြောကျတှသော ခစားပွီး၊ မြောကျဖွဈကွောငျး သကျသပွေခွငျး ဖွဈသညျ။
"ဟဲ့လူသား ဒူးထောကျကာ တောငျးပနျ၊ ငါ့ကို ကယျတငျရှငျဟု ဆိုလြှငျ လှတျလမျးကို စဉျးစားကာ ဆုလာဘျမြား ပေးသနားမညျ"
"မြောကျရှေ့ ဒူးထောကျ၊ မြောကျကို မွှောကျကာ မြောကျပေးသညျ့ ဆုအား လကျခံရခွငျးထကျ သခွေငျးက မွတျသညျ"
ပုံပွငျက ဤတှငျ ဆုံးထားသညျ။ (Who Am I? ဆိုသညျ့ အိန်ဒိယပုံပွငျတပုဒျကို ကိုးကားပါသညျ)
တခါတုန်းက သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ခရီးတခုကို အတူ ထွက်ခဲ့ကြသည်။ တယောက်က ချော်လဲ ရောထိုင် အခွင့်အရေးသမား၊ တယောက်က ယုံကြည်ချက်ကို ခိုင်မာစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားသူ။
သူတို့သည် တောနက်ကြီး တခုကို ဖြတ်သန်းသွားစဉ် မျောက်တအုပ်၏ ဝိုင်းခြင်းကို ခံလိုက်ရသည်။ လူများ လူနိုင်၊ မျောက်များ မျောက်နိုင်ဖြစ်သောကြောင့် မျောက်များ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရသည်။
မျောက်တွေက သူတို့နှစ်ယောက်ကို မျောက်ခေါင်းဆောင်ထံ ခေါ်သွားသည်။ မျောက်ခေါင်းဆောင်က လူတွေအတိုင်း ပလ္လင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေသည်။ သို့သော် မည်သည့်အပေါ်တွင် ထိုင်သည်ဖြစ်စေ မျောက်သည် မျောက်သာ ဖြစ်သည်။
သစ်ပင်ပေါ်ထိုင်လည်း မျောက်က မျောက်၊ ပလ္လင်ပေါ် ထိုင်လည်း မျောက်က မျောက်သာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုမျောက်က သူ့ကိုယ်သူ လူပုံဖမ်းကာ စိတ်ကြီးဝင် နေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူ့ကိုယ်သူ လူ ဟု ထင်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
"အရှင်မင်းကြီး လူသားနှစ်ယောက်ကို ဖမ်းလာပါတယ်" ဟု မျောက်တွေက ဆိုသည်။ မျောက်မင်းက ကြည့်လိုက်ပြီး တယောက်ကို ရှေ့သို့တိုးခိုင်းလိုက်သည်။ "ဟေ့ လူသား မင်းရှေ့က ပလ္လင်ပေါ် ထိုင်နေတာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိရဲ့လား" ဟု မေးလိုက်သည်။
ထိုသူကလည်း ပလ္လင်ပေါ်က မျောက်ကို ဦးကုန်းချကာ လက်အုပ်လေး ချီပြီး ပြောသည်။ "မှန်လှပါ၊ သင်သည် ဤလောက တခုလုံးကို စိုးမိုးအုပ်ချုပ်တော်မူသော မင်းမြတ် ဖြစ်ပါသည်"
မျောက်က မြှောက်ပြောနေမှန်း သိသော်လည်း နည်းနည်းတော့ ပီတိ ဖြစ်သွားသည်။ မျောက်မင်းက ဆက်မေးသည် "ဒါဆိုကွယ် ငါ့ပတ်လည်မှာ ခစားနေတာတွေကရော ဘယ်သူတွေလဲ" မျောက်က လည်ညှိုးဝိုက်ကာ မေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုသူက "အရှင်မင်းကြီးအား ခစားနေသော ကျေးတော်မျိုး၊ ကျွန်တော်မျိုး၊ မှူးတော်မျိုး၊ မတ်တော်မျိုး၊ သူရဲတော်မျိုး၊ သူကောင်းမျိုးတွေဖြစ်ကြောင်းပါ" မျောက်မင်းက သဘောကျသွားသည်။ "ဟေ့ ဒီလူကို ဆုတော် လာဘ်တော်ပေးကာ မြှောက်စားစေ၊ နောက်တယောက်ကို ရှေ့တော်သွင်း"
နောက်တယောက်ကို မျောက်မင်းရှေ့ ခေါ်လာကြသည်။ ပထမလူကို မေးသည့်အတိုင်းပင် မေးသည်။ "လူသား၊ သင့်ရှေ့က ပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်နေသူဟာ ဘယ်သူလဲ သိလား" ဆုရထားသူက သူ့အဖော်ကို တိုးတိုးလေး ဆိုသည်။
"ဟေ့ကောင် မြှောက်ပြော၊ စကြဝတေးမင်းကြီးလောက်ကို မြှောက်ပြော"
"ငါ့တသက် မလိမ်ဘူးပါ။ ထို့ကြောင့် မျောက်ကို မျောက်ဟုသာ ပြောနိုင်မည်"
"ဒါဆို မင်းသေမှာပေါ့ကွ၊ လိမ်လိုက်စမ်းပါကွာ ဘယ်သူသိတာ မှတ်လို့။ ဒီတောထဲမှာ လူဆိုလို့ မင်းနဲ့ငါပဲ ရှိတာ"
"အေးကွယ်၊ မင်းသိမှာဖြစ်လို့ ငါမလိမ်ချင်တာပါ။ မင်းလိုကောင်က ငါလိမ်ပြောတာကို သိသွားမှာ ငါရှက်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ မသိတောင် ငါ့ကိုယ့်စောင့်နတ်က သိမှာဖြစ်လို့ ငါမလိမ်နိုင်"
ဒုတိယလူက ပလ္လင်ပေါ်က မျောက်ကို လက်ညှိုးထိုးကာ "သင်ဟာ မျောက်ပါ" ဟု ရဲဝံ့စွာ ဆို၏။ မျောက်က ဒေါသထွက်ကာ
"သင် ယခု စကားပြောနေတာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ သိရဲ့လား"
"ကျွန်ုပ် ယခု စကားပြောနေတာ မျောက်ပါ"
"တောက်၊ စော်ကားလှချည့်၊ နောက်ဆုံးမေးမယ် ငါ့ကို ခစားနေတာတွေကရော ဘယ်သူတွေလဲ"
"သင့်အပါးမှာ ဝန်းရံ ခစားနေတာတွေကလည်း မျောက်တွေပဲ"
ပလ္လင်ပေါ်တွင် ထိုင်နေသည့် မျောက်မင်းက စိတ်ဆိုးသည်။ ပထမလူက သူ့ကို ဘုရင် ဟု ထင်သည်။ ဒုတိယ လူက သူ့ကို မျောက်ဟု ခေါ်သည်။ မျောက်သည် မျောက်ဖြစ်သော်လည်း မျောက်ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံ နိုင်စွမ်း မရှိ။
သူ့ကို ခစားနေသူတွေ ကိုလည်း မျောက်တွေဟု ပြောနေခြင်းမှာ သူ့ကို လူတွေ မခစား၊ မျောက်တွေသာ ခစားပြီး၊ မျောက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခြင်း ဖြစ်သည်။
"ဟဲ့လူသား ဒူးထောက်ကာ တောင်းပန်၊ ငါ့ကို ကယ်တင်ရှင်ဟု ဆိုလျှင် လွတ်လမ်းကို စဉ်းစားကာ ဆုလာဘ်များ ပေးသနားမည်"
"မျောက်ရှေ့ ဒူးထောက်၊ မျောက်ကို မြှောက်ကာ မျောက်ပေးသည့် ဆုအား လက်ခံရခြင်းထက် သေခြင်းက မြတ်သည်"
ပုံပြင်က ဤတွင် ဆုံးထားသည်။ (Who Am I? ဆိုသည့် အိန္ဒိယပုံပြင်တပုဒ်ကို ကိုးကားပါသည်)
Unknown 20 November 2021 at 21:01